Isiphathimandla: Isici Esilahlekile Sezindlela Eziningi Zokuqukethwe | Martech Zone
Isiphathimandla: Isici Esilahlekile Samasu Okuqukethwe Amaningi
NgoMsombuluko, Ephreli 4, 2016 ULwesibili, April 5, 2016 Douglas Karr
Alikho isonto eliqhubeka Martech Zone ukuthi asikhuthazi futhi sabelana ngamaqiniso abanye abantu, imibono, izingcaphuno, kanye nokuqukethwe kwabo nge-infographics nokunye okushicilelwe.
Asisona isiza se-curation sokuqukethwe kwabanye abantu, noma kunjalo. Ukwabelana ngemibono yabanye abantu akukwenzi igunya, kuyabona futhi kuqinise igunya lombhali. Kepha… ukuthuthukisa, ukubeka amazwana, ukugxeka, ukufanekisa nokuchaza kangcono okuqukethwe kwabanye abantu akugcini ngokuqaphela nokuqinisa igunya labo… kuphinde kuthuthukise nokwakho.
Lapho ngithola okuqukethwe ku-inthanethi okubalulekile kuzithameli zethu, ngithatha isikhathi ukukuhlaziya ngokucophelela bese nginikeza imininingwane engazi ukuthi izethameli zami zizoyithokozela. Akwanele, ngokwesibonelo, ukushicilela i-infographic eyenziwe ngomunye umuntu. Ngidinga ukwabelana ngaleyo infographic futhi nginikeze ukuhlaziywa okuphelele kwayo okuhlukile nezikhundla my ubuchwepheshe
Incazelo: Izinga lokuzethemba lomuntu owazi okuningi ngokuthize noma ohlonishwayo noma olalelwayo ngabanye abantu.
Ngaleyo ncazelo, kunezidingo ezintathu zegunya:
ubuchwepheshe - umuntu owazi okuningi futhi adalula zabo ulwazi.
Confidence - umuntu okholelwa kuye zabo ulwazi lapho behlanganyela ngalo.
Ukuqashelwa - Abanye ochwepheshe beqaphela ubuchwepheshe obukhonjiswa umuntu ngokuzethemba.
Ukuphinda uvuselele imibono yabanye abantu yakuqala ngeke kukwenze isiphathimandla. Yize kungakhombisa ukuthi unobungcweti obuthile, akukuniki ukuqonda kokuzethemba kwakho. Futhi ngeke kuholele ekutheni waziwe ontanga yakho.
Isiphathimandla sibaluleke kakhulu ohambweni lwamakhasimende ngoba abathengi namabhizinisi bafuna ubuchwepheshe bokusiza nokubazisa ngesinqumo sabo sokuthenga. Kalula nje, uma ucaphuna omunye umuntu, umthengi uzobheka umthombo wokuqala njengesiphathimandla esibonwayo - hhayi wena.
Uma ufuna ukwaziwa njengegunya, yiba igunya. Ngeke ukwenze lokho ngokuma ngemuva kwemibono yabanye abantu. Veza imibono yakho eyingqayizivele. Hlola futhi usekele imibono yakho ngocwaningo nangemibhalo. Bese wabelana ngaleyo mibono kumasayithi wemboni akuvumela ukuthi ubambe iqhaza. Wonke umshicileli uhlala efuna umbono ohlukile - kuyiphimbo elula.
Umphumela wokwabelana ngobuchwepheshe bakho ukuthi manje usulingana nontanga abahola phambili embonini yakho, unganakwa njengoba umi ngemuva kwabo. Njengoba wakha ukuqashelwa futhi wabelana ngobuhlakani ngobuchwepheshe bakho, uzothola ukuthi uzokwethenjwa futhi uphathwe ngokuhlukile. Ontanga yakho bazokubona futhi babelane ngokufaka okunikezayo.
Futhi lapho ubonwa njengesiphathimandla, ukuthonya isinqumo sokuthenga kuba lula kakhulu.
Tags: IgunyaukuzethembaUkuhamba kwamakhasimendeincazelo yegunyaubuchwephesheontangaukuqashelwa
Kusho Ukuthini Ngempela “Ukumaketha Okuqukethwe”?